FAQs - GTMSMART Machinery Co., Ltd.
Qiimahayadu waa isbedeli karaan iyadoo ku xiran saadka iyo arrimaha kale ee suuqa. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha la cusboonaysiiyay ka dib markii shirkaddaadu nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma haysaa tirada dalbashada ugu yar?
Haa, waxaan u baahanahay dhammaan amarrada caalamiga ah si aan u yeelanno tirada dalabka ugu yar ee socda. Haddii aad raadinayso inaad dib u iibiso laakiin aad u tiro yar, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso boggayaga
Ma keeni kartaa dukumentiyada khuseeya?
Haa, waxaan ku siin karnaa dukumeentiyada intooda badan oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta/U hoggaansanaanta; Caymis; Asalka, iyo dukumeentiyada kale ee dhoofinta marka loo baahdo.
Waa maxay celceliska wakhtiga hogaanka?
Shaybaarada, wakhtiga rasaastu waa ilaa 7 maalmood. Wax soo saarka tirada badan, wakhtiga hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag-bixinta dhigaalka. Waqtiyada hogaanka ayaa wax ku ool noqda marka (1) aanu helnay deebaajigaagii, iyo (2) waxaanu haysanaa ogolaanshahaada ugu dambeeya ee alaabtaada. Haddii wakhtiyada hogaanka aanu ku shaqaynayn wakhtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga. Inta badan kiisaska waan awoodnaa inaan sidaas sameyno.
Waa maxay noocyada hababka lacag-bixinta ee aad aqbasho?
30% dhigaal hore, 70% dheelitirka ka dhanka ah nuqulka B/L.
Waa maxay dammaanadda alaabta?
Waxaan dammaanad qaadeynaa agabkayaga iyo shaqadayada. Ballanqaadkayagu waa in aad ku qanacdo alaabtayada. Dammaanad ahaan iyo haddii kaleba, waa dhaqanka shirkadeena in wax laga qabto oo lagu xalliyo dhammaan arrimaha macaamiisha si qof kastaa ku qanco.
Ma dammaanad qaadaysaa keenista badqabka iyo badbaadada leh ee alaabta?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta tayada sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa baakadaha khatarta gaarka ah ee alaabta khatarta ah iyo kuwa rarida kaydinta qaboojiyaha ee la ansixiyey ee walxaha xasaasiga ah ee heerkulka. Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida ee aan caadiga ahayn waxay keeni karaan kharash dheeraad ah.
Ka warran khidmadaha rarida?
Qiimaha dhoofintu wuxuu ku xiran yahay habka aad u dooratay inaad alaabta ku hesho. Express sida caadiga ah waa kan ugu dhaqsiyaha badan laakiin sidoo kale ugu qaalisan. Baabuurta xamuulka qaada ayaa ah xalka ugu fiican ee xaddi badan. Qiimaha xamuulka sida saxda ah waxaan ku siin karnaa kaliya haddii aan ogaano faahfaahinta qadarka, miisaanka iyo habka. Fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah